हामी संसदीय व्यवस्थाको वैकल्पिक शक्ति हौं : कृति, केस, नेकपा - Janabato
नेकपाका नेता कृतिसित डा. शिवशंकर बस्यालको कुराकानी
२०७८ साउन १८ गते सोमबार ०५:३२ मा प्रकाशित
४ महिना, २ दिन, १९ घन्टा अगाडि
२९८ जनाले हेरिएको
(महान जनयुद्व सुरू भएको २६ बर्ष पुगेको छ । २६ बर्षपछिको यो समयविन्दुमा उभिएर हेर्दा नेपाली समाज फेरि पनि क्रान्तिकै पूर्वसन्ध्यामा उभिइरहेको सर्वत्र आभाष हुँदैछ । साम्राज्यवाद–विस्तारवादको आडभरोसामा टिकेको नेपालको सामन्ती राज्यव्यवस्थालाई अन्त्य गरी नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य सहित महान जनयुद्ध सुरू भएको थियो । यसक्रममा हज्जारौं वीर योद्वाहरूले उच्च किर्तिमान खडा गरे, कैयौं घाइते, अपाङ्ग र वेपत्ता भए । तर ती महान योद्वाहरूका सपनाहरू पुरा भएनन् । जनयुद्धले दस वर्ष पार नगर्दै मुख्य नेतृत्व पङ्क्तिमा आएको भयानक राजनीतिक गद्दारी र विचलनका कारण शान्ति प्रक्रियाका नाममा ती स्वर्णीम सपनाहरू भताभुङ्ग पारियो । अहिले हामी महान जनयुद्ध थालनीको २६ औं वर्षगाँठमा उभिएका छौं । माओवादी जनयुद्धको मूलधारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको नेकपामाथि राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको पनि दुई बर्ष पुरा हुँदैछ । २६ औं महान जनयुद्ध र सहिद सप्ताहको सन्दर्भमा पार्टीको अवस्था, आगामी योजना र समसामयिक बिषय केन्द्रीत नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बाला थापा ‘कृति’ सँग डा. शिवशंकर बस्यालले गरेको कुराकानीलाई यहाँ सङ्क्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ–सम्पादक)
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ ?
नेपालको पछिल्लो राजनीटिक घटनाहरुक्रमलाई विश्लेषण गर्दा यथार्थमा नेपाल ठूलो सङ्कटमा फस्दै छ र नेपाली जनता एकदमै असहज परिस्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ । जनताले सचेत तरिकाले पहलकदमी नलिने हो भने साम्राज्यवादीको अड्डा नेपाल बन्ने निश्चित भइसकेको छ । यो कुरा संसद विघटनसम्म आउँदा प्रष्ट देखिन्छ । संसद विघटन हुनुमा पहिलो केपीको निरंकुशता र प्रचण्ड माधवको अवसरवादको कारणले भएको छ भने अर्को साम्राज्यवादी शक्तिको इशारामा भएको छ । भारतीय ‘रअ’का एजेन्टदेखि विदेश सचिवसम्मको भेटघाटले प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यो दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले नेपाल झन् दलदलमा फसिरहेको छ । अर्कोपाटोबाट हेर्दा एकीकृत जनक्रान्तिको मार्ग फराकिलो भएको छ । मित्रशक्तिहरु गोलबन्द हुँदैछन् । प्रगतिशील शक्ति देशभक्त, बुद्धिजीवी, व्यापारीलगायत आम नेपाली जनताले नयाँ निकास खोजिरहेका छन् । समग्रतामा भन्दा नेपाली जनताले सहज निकास खोजिरहेको छ । यसको निकास भनेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना नै हो । देश र जनताप्रति संवेदनशील भएर सोँच्ने र कार्य गर्ने व्यवस्था भनेकै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो ।
संसद् विघटनपश्चात संसदवादी दलहरू आरोप प्रत्यारोपका जुहारीमा छन् । पछिल्लो परिस्थितिबारे तपाईहरुको धारणा के हो ?
संसदवादीहरूको आरोप प्रत्यारोप बेकार हो । आखिर यो नौटङ्की त दलालहरू बीचको महादलाल को बन्ने भन्ने मात्र हो । आखिर जो गएपनि व्यवस्था त यही नै हो । संसद झन् चुनिने नै हो समाधान त हुँदैन । संसद पुनस्र्थापना भए के ? नभए के ? पुनस्र्थापना भए अर्को पात्र आउँछ, त्यति मात्रै हो । तर यहाँ आफुलाई लोकतान्त्रिक भन्नेहरुलाई हामी के भन्न चाहन्छौं भने उहाँहरूले आफैले बनाएको संविधानलाई ‘कु’ गर्ने केपी समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्नु हुन्छ कि हुँदैन ? यो कथित सरकार अवज्ञा आन्दोलन गर्न सक्नु हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँहरुले सक्नुहुन्छ । किनकी उहाँले पनि सत्ताको ठूलो मोहमा फस्नु भएको छ । जे भने पनि उहाँको सबैको आन्दोलनको स्वरुप निर्वाचन केन्द्रीत छ । आन्दोलन पनि जोतेर थाकेको गोरुको जस्तो हालत छ । विडम्बना भनौं संसदवादी दलका नेताहरू चिन्तनमा सामन्तवाद भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । आफ्नो आदेश सबै कार्यकर्ताले मान्नै पर्ने स्थिति हरेक दलमा देखिन्छ । अन्य बिषयबारे माथि नै भनिसकेको छु । सारमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था पतनउन्मुख छ र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको ढोका खुलेको छ ।
तपाईहरूले भर्खरै २६ औं जनयुद्ध दिवस मनाउनु भएको छ । तर माओवादी आन्दोलन भने विभिन्न चिरा उपचिरामा विभाजित छ । यस सन्दर्भमा तपाईहरूको पार्टीले दिन खोजेको सन्देश के हो ?
सर्वप्रथम २६ औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग कमरेडहरू, पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई मेरो र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछु । अब तपाईको प्रश्नको उत्तरमा जाऔं । पार्टी चिरा उपचिरामा होइन, एकीकृत हुँदैछ । दुई चार जना भन्नेहरू यताउता होलान् तर क्रान्तिकारीहरू एकै ठाउँमा छन् र केही बाँकी रहेका कमरेडहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ । भ्रममा परेका कमरेडहरू पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट प्रष्ट हुनुभएको छ । आउने कमरेडहरूलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । हामी दावाका साथ भन्न सक्छौं–हामीले क्रान्तिको झण्डा नउठाएको भए प्रचण्ड–बादलको पनि हालत के हुन्थ्यो होला ? उनीहरू कहाँ हुन्थे ? यो कुरा उनीहरुले पनि बुझेका छन् र उनीहरू फर्किन सक्ने ठाउँमा छैनन् । धेरै पर पुगिसकेको अवस्था हो । एकप्रकार उनीहरू यो सत्ताको एडिक (लट) जस्तै भएका छन् । सायद उनीहरू ‘इन्जेक्ट’ गरेपछि मात्रै बाँच्न सक्ने अवस्थामा छन् । उनीहरुको राजनीतिक जीवन पतन भइसकेको छ । नेपाली जनतालाई हाम्रो सन्देश यो छ कि जनयुद्ध सकिएको छैन । विकास भएको छ । एकीकृत जनक्रान्ति यसको विकसित रूप हो । नेपाली समाजको विशेषता अनुसार यही कार्यदिशाबाट मात्रै उत्पीडितहरुको मुक्ति सम्भव छ । यो क्रान्ति हलो जोत्ने निम्न किसानदेखि अहिलेको आधुनिक मजदुर र वैज्ञानिकसम्मलाई आवश्यक छ । किनकी यहाँ सबैको श्रमलाई शोषण गरिएको छ । त्यसैले हामीले सबैलाई एकीकृत जनक्रान्तिको झण्डामुनि गोलबन्द हुन आब्हान गर्दछौं ।
तपाईहरूको नेतृत्वकै कारण जनयुद्ध यो अवस्थामा आइपुगेको भन्नु हुन्छ । प्रचण्ड–बाबुराम–बादलहरूप्रति तपाईहरूको बुझाई के हो ?
हो, नेतृत्वले गद्दारी गर्यो । यस बिषयलाई धेरै नकोट्याउँ । किनकी मरिसकेको बस्तुलाई चलाउँदा तपाई हामीलाई पनि दुर्गन्ध आउँछ । हरेक आन्दोलनमा सुरूमा जनताले र कार्यकर्ताले जोखिम मोल्छ । पछि निर्णायक मोडमा आउँदा नेतृत्वले जोखिम मोल्ने समय आउँछ । त्यतिखेर जुन नेतृत्वले राष्ट्र र जनताका लागी बलिदान दिन तयार भयो त्यहाँका जनताले मुक्ति पायो । जहाँ नेतृत्व कायर भयो त्यहाँ आन्दोलन पनि बिसर्जन हुन पुग्यो । हाम्रो पार्टीले यसबाट शिक्षा लिएर अगाडी बढिरहेको छ । तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ, हामीले क्रान्तिमा नेतृत्व र कार्यकर्ता दुवैले जोखिम मोलिरहेका छौं । अगाडी बढ्दै जाँदा थप प्रष्ट हुँदैजाने छ ।
तपाईहरूसँगै सहकार्य गरेका अझ भनौं नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूको सरकारकै पालामा प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ के हो ?
हिजोको कुरा छोडौं । उनीहरू दलाल भइसकेपछि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न जे पनि गर्न सक्छन् । अहिले हामी हेर्दैछौं, उनीहरूले आफैले पश्चाताप गरिरहेका छन् । अव रहे प्रतिबन्धका कुरा, हामीमाथि नक्कली कम्युनिस्टहरूले प्रतिबन्ध लगाएर लाग्ने हो र ! यो प्रतिबन्ध राजनीतिक ऐजेण्डाका बिषय मात्र हो । हामीले हेर्ने जनतामा प्रतिबन्ध के छ भनेर हेर्नुपर्छ । हामी जनताबाट प्रतिबन्धित छैनौं, जनताकै काखमा हुर्किरहेका छौं । यो त हाम्रो नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारीबाट पनि बुझ्नु भएकै छ होला । प्रतिबन्धित त पूर्वमाकेको केपी समूहबाट भएको छ । पार्टी कार्यालय प्रवेश निषेध भइसक्यो । उनका नेता कार्यकर्ता लुकेर हिँड्ने भइसक्यो । पार्टी र संसदमा बहुमत छ भन्छ तर केपीले आफ्नै ढंगले संसद पनि विघटन गरिसक्यो । के यो उनीहरूमाथि एकप्रकारको प्रतिबन्ध होइन ? केपीलाई पनि प्रतिबन्धको दिन आउँदैछ । अहिले यो प्रतिबन्ध केपीलाई नै गलपासो भएको छ । हाम्रो पार्टी हिजो, आज र भोली जहिले पनि जनताकै बीचमा हुर्किनेछ ।
के प्रतिबन्ध यही अवस्थामा रहिरहन्छ ?
प्रतिबन्ध रहोस् या नरहोस् हामीलाई केही फरक पर्दैन । जनताको आँधीबेहरीले यसलाई फ्याँकिदिने छ । माथि नै भनिसकेको छु कि यो जसले लगायो त्यसैलाई गलपासो भएको छ ।
प्रतिबन्धपछि देशभर पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि दमन र गिरफ्तारी भइरहेको छ । यसले के आन्दोलनमा शिथिलता आएको हो ?
झुठा मुद्दा र गिरफ्तारीले आन्दोलनमा शिथिलता होइन, शिक्षा प्राप्त भएको छ । हाम्रो कार्यशैली बदल्नुपर्ने भएको छ । जनता र कार्यकर्तामा दलाल सरकारको यो हर्कतले आक्रोश पैदा गरेको छ ।
पार्टीको अवको योजना के हो ?
पार्टीको आगामी राजनीतिक योजना दलाल फासीवादी फासीवादी शक्तिबाहेक सबैलाई गोलबन्द गर्ने, जसलाई यो सङ्कटलाई निकास दिन सकोस् । संगठनलाई सुदृढ गर्दै जनताका बीचमा फैलिने । जनअनुमोदित सङ्घर्ष गर्ने । अहिले जनतासँग जसको अन्तरविरोध छ, त्यसलाई केन्द्र बनाउने । समाजवादी अर्थप्रणालीको अभ्यास सबै पार्टी कमिटीले गर्ने । नेता र कार्यकर्ताको जीवन सरल र पारदर्शी बनाउने । यही नै हाम्रा आगामी योजनाहरू छन् ।
सुनिन्छ, यतिखेर तपाईहरूले सङ्घर्ष कार्यक्रम स्थगन गर्नुभएको छ । स्थगन गर्नुको कारण के हो ?
होइन, होइन । सङ्घर्षको कार्यक्रम स्थगित भएको छैन । जनताको माग अनुसार जनता नै लिएर हामी सङ्घर्षमा नै छौं र यो निरन्तरतामा नै छ । सङ्घर्षको ग्राफ परिस्थिति अनुसार अलिकति तलमाथि होला तर हाम्रो सङ्घर्ष वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त नहुँदासम्म निरन्तर जारी रहन्छ ।
शीर्ष नेताहरूको गिरफ्तारीले पार्टीभित्र र बाहिर सङ्घर्षमा केही धक्का लागेको हो ?
नेतृत्वको गिरफ्तारीले असर त पारिहाल्छ । तर हिजोको दिनमा नेतृत्वको बलिदान गरेको पार्टीले गिरफ्तारीबाट भएको क्षतिलाई सम्हाल्दै अगाडी बढ्न सक्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो पार्टी मात्रै छ, कमाण्ड इन्चार्जसहित एउटै ब्युरोका ९५ प्रतिशत नेतृत्वका कमरेडहरू गिरफ्तार हुँदा पनि उक्त ब्युरोलाई सकुशल अगाडी बढाउनु सफल भयो । बाहिर जनतामा हाम्रो सुरक्षा प्रणालीबारे चिन्ता गरेको बिषय पनि आएको छ । यो स्वभाविक हो । एउटा नेता गिरफ्तार हुँदा कार्यकर्ता र जनता चिन्तित हुन्छन् र आक्रोशित पनि हुन्छन् ।
तपाईहरूले आफुलाई वैकल्पिक सत्ता र शक्तिको रूपमा दावा गरिराख्नु भएको छ । यो राजनीतिक तरलता बीचमा तपाईहरूको भूमिका के हुन्छ ?
हो, हाम्रो पार्टी मात्रै वैकल्पिक शक्ति हो । जनताको सत्ता अत्यन्तै सरल तरिकाले सञ्चालन गर्दै आएको अनुभव पनि हाम्रो पार्टीको छ । यो तरलताको निकास भनेको वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै हो । हामीले सु्न्ने गरेका छौं, कतिपय आफुलाई विद्धान ठान्नेहरूले व्याख्या गर्ने गरेका छन् कि अब यो सरकार वा सरकारको नेतृत्व दक्ष व्यक्ति युवा पुस्ता वा प्रणालीमा हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर तर्कहरू गरिरहेका छन् । यो सब वाइघात तर्क हो । जो आएपनि जसो गरेपनि यो व्यवस्थाभित्र परिणाम यस्तै नै आउँछ । सामान्य सुधारसम्म पनि असम्भव देखिन्छ । मैले माथि नै भनिसकेको छु, आम जनतालाई हामीले आब्हान गरिसकेका छौं दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था प्राप्तिको सङ्घर्षमा गोलबन्द हुनका लागी ।
सम्भव छ । किनकी नेपाली जनताले बुझिसके कि आजसम्म धेरै पार्टी र धेरै नेता हेरिसके र अहिले बुझे कि नेता र पार्टीभन्दा मूल दोष व्यवस्था नै रहेछ । यस बिषयमा कुनै सन्देह अब नेपाली जनतामा छैन । त्यसैले यो कुरा सम्भव छ । अर्को कुरा उत्पीडितहरूले स्वतन्त्रता पाएका छन् भने त्यो जहाँ समाजवादी व्यवस्था प्राप्त भयो, त्यहाँ मात्रै पाएका छन् । पुँजीवादी व्यवस्था भएको देशमा उत्पीडितहरूले मुक्ति पाएको एउटा मात्रै देश कसैले दिन सक्छ ? कसैले सक्दैनन् । हिजो महिला, मजदुर र किसानलाई भोट हाल्ने अधिकार कसले दियो ? नेपालकै हकमा समानुपातिकका आधारमा सत्तामा कसले सहभागिता दिलायो ? यो कुरा जनताले राम्ररी बुझेका छन् । हाम्रो पार्टीले भनेको छ, तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउने मात्रै होइन, सत्यको सम्भावनालाई पक्रने प्रधान हो । हामीलाई अहिलेको सम्भावनालाई पक्रन सक्छौं भन्ने विश्वास छ । अन्तरविरोधको निकास दर्शनमा खोज्ने हो भने सम्भव छ । त्यसैले असम्भव भन्ने केही हुँदैन ।
२६ औं जनयुद्ध दिवस र सहिद सप्ताहको अवसरमा हाम्रो विचार जनतामा पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद । सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई सत्यको पक्षमा कलम चलाउन आग्रह गर्दछु ।
(स्रोत : लालदिशा)
सङ्ग्रामी सांस्कृतिक परिवार रुपन्देहीको जिल्ला भेला